Indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli Barbie kanye Monster High?
Game unodoli zikhula 35 amasentimitha namhlanje phakathi amathoyizi ezidume kakhulu amantombazane emhlabeni wonke. On ukudayiswa ungathola hhayi kuphela wonke umndeni unodoli yonke ukunambitheka kanye isabelomali, kodwa futhi ezihlukahlukene izesekeli. Yilo leli iphupho wabo bonke amantombazane Doll House nge ifenisha. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ukuthenga uma eziningi imidlalo fun ungenza ngezandla zakho siqu? Namhlanje bakutshele indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli ekhaya.
Ilungiselela imidwebo kanye nokuzikhethela materials
Ukulungisa endlini njalo iqala iphrojekthi, lokho kuyisiqalo esibi kunazo zonke dollhouse? Ngaphambi kokuqhubeka kunqubo, kubalulekile ukudweba umdvwebo, noma umdwebo kangcono kodwa anembile nazo zonke izilinganiso ekhishini esizayo. Nquma endaweni ngendlu ifenisha, kanye ukucushwa oyifunayo. enele: usinki, edeskini, isitofu. Uma kukhona isikhala esanele, ungakwazi ukwengeza uhlanganyela ikhabethe, efrijini futhi endaweni yokudlela. Kogqozi, iya ekhishini lakho siqu, noma ukubona omagazini nge izithombe lezi Interiors. Indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli zokukhekheleza? Bheka izinto ofanele: cishe njalo endlini kukhona izinsalela iphepha lokunamathisela odongeni, itheyiphu self-Yesigcilikisha kanye amashidi oplastiki. Konke lokhu kuyoba wusizo unodoli yethu yezandla. Esikhundleni zokwakha, ungasebenzisa iphepha anemibala futhi amakhadibhodi ngobuciko zezingane, zama ukuba uzitholele imidwebo ezifanele. Wona njengoba ifenisha elula kunazo leyakhiwe ngemabhokisi noma ipulangwe.
Indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Indaba ezidume kakhulu okuzenzela unodoli ifenisha kuyinto amakhadibhodi. Kalula ukuthatha amabhokisi amancane amaningana. Kulesi sigaba, umsebenzi wakho - ukunamathisela ndawonye futhi usike umnyango izindawo ezilungile. Uma onawo kuphela amashidi amakhadibhodi noma amabhokisi ezinkulu, womshini ifenisha ku isisekelo yabo usayizi olungile. Empeleni ukuqoqa ukwakhiwa amakhadibhodi akunzima. Prakthiza phezu kwebhokisi sikwele, ukudala ke udinga kuphela ukunamathisela emhlabeni azungezwe 6 izingxenye alinganayo kokuba simise sikwele. Ikhishi isethi kulula ukwenza wonke - uhlangane wonke amatafula umsebenzi amakhabethe nomunye. Uma indaba emfushane yakho odongeni amakhabethe, unamathele isihlanganisi engezansi ifenisha udonga okuqinile emuva. Ukuze engxenyeni engenhla kungase kufakwe emashalofini futhi amacala isibonisi.
Ikhishi ifenisha for Monster High
Umbuzo: "Indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli ngezandla zabo" - sikhathazeke kuphela abalandeli Barbie. Doll ifenisha kuyasiza umdlalo izinhlamvu uchungechunge Monster High. Ngobukhulu, lab 'onodoli efana Barbie, ihlukanisa kubo zibonakala engavamile. Monsters, njengoba uthanda ukubiza zabanikazi, njengazo zonke ezimnyama futhi engavamile. Ngakho, futhi ukuklanywa ifenisha kuzodingeka basebenze ngezinto ezicatshangelwayo ngabo. Indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli Monster High hhayi aphanjaniswe nge isitayela? Ngamunye unodoli kulolu chungechunge isitayela yayo ehlukile futhi uhlamvu ngabanye. inketho Universal - ukukhetha imibala emnyama oluxube elikhanyayo. Monster onodoli High uzongithanda black and pink ekhishini. Ukuhlobisa eseqedile ifenisha ikhathuni izingebhezi namadizayini gothic. umqondo ezithakazelisayo - ukuyisebenzisa ukuze kokuqeda izingcezwana ekhishini amabhokisi magazini onodoli yamaphephandaba ngazo noma stickers Alungile Amatshwayo Monster High uphawu.
Thina zakha axazulule ekhishini
Usuvele uyakwazi indlela yokwenza ekhishini ngoba onodoli ngezandla zabo, kodwa akunakwenzeka indodakazi yakho kuzoba mnandi ukudlala amakhadibhodi amabhokisi ne bevula iminyango. Isigaba ezithakazelisayo kakhulu umsebenzi - ifenisha lokubhalela. Obkleyte ekhishini self-Yesigcilikisha ifilimu, izinsalela iphepha lokunamathisela odongeni, evala iphepha noma umbala. Zonke ikhabethe evulekile kufanele ukuhlobisa ngaphakathi. Hambisana izibambo ifenisha, izingwegwe zingenziwa. Ungakhohlwa ukwenza igobolondo - ukudala ke cap eqhuma izimbiza yezimonyo, umane ulinamathisela phezulu etafuleni noma aboshelwe slot elihambisana ubukhulu. Unohemu zingenziwa amashubhu noma ngocingo futhi asingathe mixer - lobuhlalu. izinkinobho elinemifanekiso noma ubuhlalu ubumba Site womshini inkomishi lendze igesi endzaweni lephephile. Ungabi lazy ukupenda noma uzitholele ku iphrinta yakho futhi unamathele Tile iphinifa phezu echibini. Yilokho, ikhishi yakho isilungile, doll usungaqala ukudala okujabulisa lokuqala Culinary.
Crochet nge Ubuhlalu: isigaba master Wabasaqalayo
Kanjani ukwakha Tinkerbell imvunulo ngezandla zakho?
Ifoni Isabelomali: yini okumelwe siyibheke lapho ukhetha smartphone
Cardio - isiqinisekiso ezempilo isesimeni esihle ngokomzimba
Pheka cheesecakes abangelwa yisisindo izaqheqhe - kuba okumnandi, mnandi ewusizo!